RAMBUTAN: GURYAHA FAA'IIDO IYO KHILAAFAADKA, FAA'IIDADA IYO WAXYEELADA, DHADHANKA IYO KAYDINTA, NADIIFINTA IYO SII KORDHINTA MIDHAHA GEEDKA DHAGAXDA GURIGA - SOOSAARKA DALAGGA
Rambutan Fruit: Guryaha waxtarka leh iyo Beeraha Lafaha
Kuwa u yimid dalxanno kulaylaha waa in ay arkeen miraha tufaaxa ah ee cajiibka ah ee casaanka casaanka ee cabbirka nuts ballaaran. Qaar ka mid ah xitaa way isku dayeen inay tijaabiyaan. Waxaad sidoo kale ku arki kartaa dukaamada waaweyn. Mawduuc noocee ah ayay tahay iyo haddii ay suurtagal tahay dadka ku nool meelo aan laga cunin si ay u cunaan, waxaad sii baran doontaa dheeraad ah.
Rambutan (oo ah Latin Nephelium lappaceum) waa geed ka mid ah caleemaha Nephelium, Sapindovye. Magacani waxaa la siiyay sababtoo ah miro lagu daboolay timaha (gudaha Indonesia, rambut waxaa loo yaqaan timaha). Geedkani waa mid soo baxa, taas oo ah, caleemuhu marnaba ha noqdaan jaalle oo ma dhicin. Waxay yihiin oval-qaabeeya, laba lammaane loo diyaariyey 2 ilaa 8 gucood oo isku mid ah petiole, laamuhu waxay sameeyaan taaj qurux badan. Geedku wuxuu kori karaa ilaa 25 m dhererka wuxuuna ku noolaan karaa ilaa 70 sano. Geedka ubaxyada ubaxyada yar yar ayaa soo uruuriyey. Miraha laba jeer sannadkii, miraha bislaaday daboolay diirka raspberry, oo ka kooban laba qaybood oo lagu daboolay timo cas oo adag (mararka qaarkood leh cagaar cagaaran) leh dherer ah 1 cm, oo isku xoqaya dhinacyada. Waxay u ekaadaan wareega ama qaabka ukunta, qiyaastii 5 cm oo cabbirka, waxaa lagu diyaariyaa burushyo ku saabsan 25 gogo ', waxay u egtahay jimicsi.
Ma taqaanaa? Dalka Thailand, erayga rambutan waxaa sidoo kale loo yaqaannaa maqaarka madow iyo timaha gaaban.
Rambutan wuxuu ku yaalaa dalalka Aasiya, Hindiya iyo Australia: Indonesia, Cambodia, Filibiin, Hindiya, Malaysia, Thailand, Indonesia, iyo sidoo kale wadamada Central iyo South America oo ku yaal Kariibiyaanka, Australia , Sri Lanka.
Baro waxa ka mid ah kivano, loquat, feijoa, kumquat, citron, okra, pepino, actinidia, zizifus, tufaaxa Adam, guava, longan, papaya, lychee, mango iyo cananaaska.
Faytamiin Rambutan ayaa hodan ku leh fitamiin C waxaana sidoo kale ku jira fiitamiin B3 (PP), B2, B6, B5, B1, B9 (folic acid), A. Intaas waxaa dheer, mirahaas waxaa ku jira potassium, iron, sodium, copper, fosfooraska, manganese, calcium , zinc, magnesium. Waxaa jira waxyaabo badan oo loo yaqaan 'arachidonic and oleic acid' ah.
Qiimaha tamarta iyo kalooriga
Sida laga soo xigtay Daraasadda Cuntada Qaranka ee Waaxda Beeraha ee Mareykanka Rambutan waxaa ku jira 100 g oo ah sheyga:
carbohydrates - 20 g;
borotiinka - 0.65 g;
dufanka - 0.2 g;
biyaha - 78 g;
Fiber - 0.9 g;
ash - 0.2 g
Sumadda 100 g ee rambutan waxaa ku jira 80 kcal.
Kobcin tufaaxa, miraha iyo rummaanka guriga.
Sababtoo ah rambutan waxay ka kooban tahay waxyaabahan faa'iido leh:
wuxuu jidhka siinayaa collagen - walax sameeya unugyada jirka;
waxay kor u qaadaa soo saarida serotonin (hormoonka farxada);
wuxuu hagaajiyaa xinjirowga dhiigga;
hagaajinaysaa dheef-shiid kiimikaad;
waxay kicisaa nidaamka dheefshiidka, dareemayaasha iyo neefta;
waxay hagaajinaysaa aragga;
waxay yareysaa daal;
faa'iido leh cudurrada maqaarka.
Daawooyinka dadweynaha ee cimilada kulaylaha, miraha waxaa loo isticmaalaa sida anthelmintic, shubanka; caleemo - daaweynta madax xanuun, nabarrooyin, gubasho, dib u soo kabasho, kordho cadadka caanaha ee haweenka uurka leh; xididka - heerkulka sare, stomatitis, gingivitis. Shumacyada, saabuunta waxaa laga sameeyaa rambutan, dharka ayaa loo rinjiray iyaga, dahabkuna wuxuu ka sameysan yahay qoryo.
Khilaafaadka iyo dhibaatada
Isticmaalka miro ayaa ka horjoogsan dadka qaba dareen-celin xasaasiyadeed. Intaa waxaa dheer, ma aha in aad aad u qaadato iyada oo leh, sababtoo ah nidaamka dheefshiidka, kaas oo aan ku badneyn in qalaad, ma adkeysan karaan load, iyo tani waxay keeni doontaa caro.
Waa muhiim! Digniinta - Lafaha ceeriin ee rambutan waa sun, laakiin waa la kariyaa oo la cunaa.
Sida loo doorto
Maqaarka rambutan u bislaaday waa mid casaan iyo mid yar oo cagaaran ah, midab orange ama midab cagaaran waxay muujinaysaa midho aan macquul ahayn. Ma aha in ay noqdaan dhibco mugdi ah, kacsan, timo madow.
Midabkani ma jecla qoyaan la'aan iyo heerkulka, luminta dhadhankiisa ka dib 3 maalmood. Si aad u dheereysid nolosha shelf illaa 3 asbuuc, waxaad u baahan tahay inaad heerkulka qolka ku siiso 8 ilaa 12 ° C, iyo qoyaan - ilaa 90%.
Sida loo nadiifiyo rambutan
Midhaha Rambutan waxaa lagu tirtiraa gacmaha ilaa farqiga u muuqda, ka dibna kala tago oo laga xoreeyo diirka. Duufku sidoo kale waa mid u nugul inuu jarayo mindi fiiqan. Marka xigta, waxaad u baahan tahay inaad ka soo baxdo lafa-casuxul weyn oo midab-leh (haddii aysan ahayn noocyo kala-sooc la'aan ah).
Dhadhanka iyo urka midhaha
Hilibka midhaha waa caddaan ama casaan, adigoo xasuusinaya jelly ee joogtada ah. Waa mid casri ah, ur fiican, macaan iyo dhanaan oo dhadhan, waxay u egtahay canab cad oo leh dareenka strawberries iyo raspberries. Lafaha dufanka leh waxay leeyihiin dhadhanka doofaarka.
Ma taqaanaa? Dadka reer Thai waxay yiraahdaan rambutan waxay dhadhamisaa ambrosia (daaweyn aan keenin ilaahyo aan dhiman oo aan u ogolaaneynin da ').
Miraha waa la cuni karaa hilib la'aan iyada oo aan lagu darin, waxaa loo isticmaali karaa salad khafiif ah ama kariyo macaanka.
Qiimaha Rambutan ee Tayland waa qiyaastii $ 1.23, waddamada USSR horay waxay u gaari kartaa $ 21 kiiloogaraam.
Kobaca rambutan waxay joogi kartaa guriga, adoo eegaya shuruudaha carrada iyo xaaladaha sii kordhaya.
Substrate iyo bacriminta
Ciidda beeritaanka waxaa laga iibsan karaa dukaanka ubaxa oo lagu qasan yahay peat (3 qaybood oo ciid ah 1 qaybood oo ah peat). Ka hor inta beerto, ciidda waa in si wanaagsan loo furo. Sanadkiiba laba jeer, ciidda dabacsan oo cusub ayaa lagu shubay dheriga oo la bacrimiyey. Marka geedku koro, waxaa lagu daraa digsi kale oo leh ciid cusub.
Keenaan canjeero xaaladaha qolka.
Diyaargarowga lafaha iyo dhulka
Kaliya lafaha midhaha bislaaday ayaa ku habboon koritaanka. Waxaa si taxaddar leh looga saaraa saxarka, isku day inaadan waxyeello, tirtir tuwaal waraaq ah oo ka tag. Kadibna qayb ka mid ah suufka ayaa lagu rusheeyaa biyo, oo la isku ururiyey, lafta ayaa ku duuban hareeraha, ku rid weelka daboolka leh, waxaana loo qaadaa qol diiran 2 toddobaad. Inta lagu jiro wakhtigan, lafta waa in ay Gagaashaa. Haddii tani aysan dhicin, markaa waxaad u baahan tahay laf kale. Biyaha waxaa lagu shubaa dheriga yar ee hoose, ka dibna ciidda iibsaday dukaanka waxaa lagu dhuftay dhagax dhuxul ah si qoto dheer ah 3 cm oo la aasayo. Carrada si joogto ah ayaa loo waraabiyaa si looga hortago qalajinta. Dheriga waxaa lagu daboolay filim waxaana la dhigayaa daaqada dhinaca qorraxda.
Waa muhiim! Kobaca caadiga ah, rambutan waa lagama maarmaan in la helo iftiin ilaa 12 saacadood maalintii.
Caleemaha ugu horreeya waa inay muuqdaan bil gudaheed, kadib 2 caleemo oo dheeraad ah ayaa bilaabi doona inay koraan. Hadda waxaa lagu wareeri karaa dherer weyn.
Haddii geedku si liidata uu u koro, waxay ka dhigan tahay in uu qoyan yahay. Waa in la mariyaa 2 jeer maalintii (subaxda iyo fiidkii), sidoo kale ku buufin caleemaha dhalada buufinta. Isla mar ahaantaana suurtogal maaha in la oggolaado biyo joogta ah ee dheriga.
Heerkulka iyo daryeelka
Si loo siiyo rambutan xaaladaha caadiga ah ee korniinka, ma suurtageli karto in heerkulka hawadu hoos u dhigto +10 ° C, waana fiicantahay in la fiiriyo at +18 ° C Sidaa darteed, ee dhulka u furan ee xaaladaheenna aan la beeray karo, laakiin waxaa lagu kori karaa in lagu koriyo ah.
Rambutan waxay soo saartaa midho laba jeer sannadkii - Bishii 7aad iyo 12aad. Haddii aan la tallaalin, waxay bilaabeysaa inay midho dhasho 5 sano kadib. Iyadoo geedaha la tallaalay, waxaad heli kartaa miro 2 sano ah. Soo-saarka ugu sareeya ee Rambutan wuxuu bilaabmaa 8 sano kadib. Sidaa daraadeed, isticmaalka rambutan ee qofka ayaa lagu muujiyay oo keliya mawduuciisa, laakiin sidoo kale waxa uu awood u leeyahay in lagu isticmaalo daaweynta daaweynta dadka. Waxay leedahay muuqaal aad u asal ah, sidaas darteed rambutan waxay qurxin kartaa koriyo kasta, haddii aad go'aansato inaad ku beerato guriga. Laakiin ka taxadar markaad u isticmaaleyso, si aadan u dhalin xasaasiyad.